Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Marcus Rashford Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Anyị Marcus Rashford Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Ndụ Onwe na Net Net.
Na nkenke, anyị na-enye gị nyocha adịghị mma gbasara akụkọ ndụ Rashford. Lifebogger malitere site n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama na United.
Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịnala gị sie ike, nke a bụ ebe obibi nke ụmụ ama ama na ama ama - nchịkọta zuru oke nke Marcus Rashford's Bio.
Ihe omuma nke Marcus Rashford - Site na nwata rue oge nke oganihu.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya na pitch. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole abanyela n'ime ọgụgụ Marcos Rashford Life Story nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido
Marcus Rashford Storymụaka Akụkọ:
N'ihi na ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha ahụ - Onyeisi England. A mụrụ Marcus Rashford MBE na 31st ụbọchị nke Ọktoba 1997 nna ya, Robert Rashford na nne ya, Melanie Maynard, na Wythenshawe, mpaghara ndịda Manchester, England.
Marcus Rashford, ọnwa ole na ole mgbe ọ dị afọ abụọ.
Ndị amụrụ bekee bụ ndị bekee bidoro n'ezinaụlọ ndị otu Kristi na ụbọchị Halloween. Ka a sịkwa ihe mere, Marcus bụ onye maara ihe - nwatakịrị nwoke bụ onye àgwà ya na ụwa mechara mee ka ụwa maa jijiji.
Nwa amaala Manchester bịara ụwa dị ka onye ikpeazụ a mụrụ dị ka nwa nke ụlọ. Ọ bụ otu, n'ime ụmụnne ndị okenye anọ ndị amụrụ site na njikọ dị n'etiti ndị mụrụ ya gosipụtara ebe a.
Zute nne na nna Marcus Rashford. Nna ya (Robert) na mama m (Melanie).
Na-etolite na Manchester:
Rashford nọrọ na nwata na Greater Manchester. A zụlitere ya na mpaghara siri ike nke Wythenshawe, mpaghara obodo ahụ.
Nke a bụ ebe o toro na ụmụnne ya ndị okenye; ụmụnne nwanyị abụọ, Claire na Chantelle, na ụmụnne nwoke abụọ, Dane Rashford na Dwaine Maynard.
N'ichezọ, o nwere ọkara nwanne nwanyị aha ya bụ Tamara Rashford na onye ọ bụla ya na ya bụ nna nwere otu nne. Site na itinye aka, ọ bụ ọkara nwanne Marcus.
Marmụnne Marcus Rashford. Zute umu-nne-ya; Dane Rashford na Dwaine Maynard na ụmụnne nwanyị; Tamara na Chantelle.
Ndabere Marcus Rashford:
Nchịkọta dara oke ọnụ anyị na-ahụ ka ọ na-ekpori ndụ taa adịghị anya na nzụlite siri ike ya.
Marcus Rashford zụlitere nne na nna naanị ya - nne ya. Ya, Melanie Maynard, lekọtara ụmụntakịrị ya ise ka ha na-arụ ọrụ oge niile dị ka onye na-ahụ maka ego (na Ladbrokes) onye na-akwụ ụgwọ opekata mpe. Mel mere naanị ya - na ọtụtụ ndị ọzọ.
N'agbanyeghị na-arụ ọrụ oge niile, ego agaghị ezu ịbata ka ezinụlọ ha rie nri ugboro atọ.
N'ihi nke a, agụụ dara Marcus na ụmụnne ya agụụ. N'aka nke ozo, o gha echere nne ya (Melanie) ka o si ulo oru bia - o na-ewe ihe dika elekere asaa nke mgbede - tupu o rie nri nke abuo.
N'ihi enweghị ike ilekọta ezinụlọ, Melanie weere ọrụ ọzọ iji kwado ya na Ladbrooks.
Ọ hapụkwara nri n'onwe ya iji hụ na obere Marcus na ụmụnne ya riri nri. N'ikwu okwu banyere ahụmahụ nke ịda ogbenye, nne nke ụmụ ise gwara BBC;
Achọrọ m ọrụ atọ ma ọ bụrụ na emeghị m nke ahụ, anyị agaraghị enwe ike sie ite nri. Nke a bụ otu o siri sie ike. Mgbe ụfọdụ, anyị enweghịdị ogbe achịcha n’ụlọ. Ee, ọ bụ ihe ihere ịsị, mana anyị enweghị ya. ”
Ọchịchọ maka Nlanarị Childhoodmụaka:
Nsogbu ego ezinụlọ Marcus Rashford (mgbe ha na-etolite) dugara n'ọchịchọ dị ukwuu maka nne Melanie ka ọ chọọ ịlanarị - maka ụmụ ya.
Isoro BBC nri ụtụtụ, ndị England bọọlụ kọwara otu mkpebi mkpebi mama ya mere iji gboo nsogbu ezinụlọ ha. N'okwu ya;
“Ọ bụrụ na nri dị n’elu tebụl, mgbe ahụ nri dị. Ọ bụrụ na enweghị, aga m aga leta ndị enyi. Naanị m gara leta ndị ghọtara ọnọdụ m.
Mgbe ụfọdụ, ọ na-ekwe m omume ịga n'ụlọ ha iji nweta ihe oriri. ”
Marcus Rashford Ezinụlọ:
N'ikpeazụ, a maara onye na-eti ihe ịbụ onye sitere na Jamaica. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ndị nne na nna Marcus Rashford nwere mgbọrọgwụ ezinụlọ Caribbean.
Nna ya, Robert si Jamaica ebe nne Rashford, Melanie si St Kitts, obere mba Caribbean.
Maapụ a na-akọwa mbido nne na nna Marcus Rashford.
Ihe Marcus Rashford kwuru na nna nna ha:
Gburugburu 2020, Ex-Ghanaian footballer by the name- Michael Boye Marquaye, mere nkwupụta siri ike na ọ bụ ezigbo nna nke Manchester United kpakpando.
Nna nna a na-azọrọ na ọ bụ Marcus Rashford kwuru na nwa ya kwesịrị ibu ezigbo aha - Jonathan Maama Marquaye na Ọ B .GH. Marcus Rashford nke ndi football na-akpo ya.
Nke a bụ Michael Boye Marquaye. Nna a na-ekwu na ọ bụ Marcus Rashford.
Mgbe ọ na-enye foto nke oge ntorobịa ya ka o wee nwee ike ịkwado azịza ya, Marquaye gwara ụlọ ọrụ redio Ghanian, Starr FM na ọ dị njikere maka nnwale DNA nna. N'okwu ya;
Marcus Rashford bụ nwa m mụrụ na ọ maara ya. ọ bụ ezie na anyị ahụbeghị ibe anyị kemgbe ọtụtụ afọ. Marcus were iwe n'ihi na ọ na-eche na m gbahapụrụ ya, mana B DGH TO M B THAT.
ndị mmadụ na-agwa m ka m nweta akụkọ ọhụrụ, mana abughi m ụdị nke na-achọ ụzọ dị mfe iji nweta ego ma ọ bụ bụrụ onye a ma ama.
Naanị m chọrọ ime ka ihe doo anya na, ka ụwa mara na Marcus Rashford nwere mgbọrọgwụ ezinụlọ Ghana.
Ndụ tupu ịghọ Manchester United:
Dịka nwatakịrị, obere Marcus na ụmụnne ya na-egwu egwuregwu. N'oge ahụ, ọ na-ara ahụ ịgba bọl na ubi ya, n'ime ụlọ ezinụlọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla.
Marcus kwetara na ya na-agbagha ihe mgbe niile na mmepe a mere ka mama ya tie mkpu banyere àgwà ya.
Banyere Marcus Ball:
Dika nwatakiri, nne ya, Melanie enweghi ike inye ya ihe eji egwuri egwu ohuru dika otutu umuaka nwere na Wythenshawe agbata obi. Ka o sina dị, obere Marcus nwere akụ dị oké ọnụ ahịa ya.
Ọ bụ bọọlụ ọcha na-acha ọcha nke ọ kpọrọ 'ịhụnanya'Bọọlụ Marcus'na mkpado ojii ojii. N'okpuru ebe a, ọ debere ya n'akụkụ ya oge niile.
Ntụkwasị obi na nwata a na-akpọ "Marcus's Ball" bụ akụ nwata ya kachasị jiri kpọrọ ihe.
Mgbe ọ kwụsịrị ihe n'ụlọ, nwatakịrị ahụ na-eme ihe ike mechara malite ịgba ya Bọọlụ Marcus elu ụlọ nke ụlọ ezinụlọ ya.
Oge a, obere Marcus na-anwa ịchịkwa bọl ahụ ka ọ gbadata. Ọ maghị na omume ahụ dugara ntọala nke ọrụ ya. Dị ka Rashford si kwuo;
“Amaghị m na mama m nọ ya, na-ele mgbe m na-agba bọọlụ n’elu ụlọ anyị.
Enwere m ike icheta na ọ na-ekwusi ike na ọ ga-akpọrọ m ka m sonye na klọb ndị ntorobịa ka m wee nwee ike igwu egwu karịa ụmụ nwoke ahụ kama ịnọ m na-egwu bọọlụ na ụlọ anyị.
Nkwupụta a gosipụtara ụzọ dị mkpa maka ntọala ntorobịa m. ”
Marcus Rashford Oge mbu ya na Fletcher Moss Rangers:
Nke a bụ Little Marcus na Fletcher Moss Rangers.
Melanie debara aha ya dị afọ ise na mpempe akwụkwọ, ebe ụmụaka na-agba bọọlụ hiwere na 1986, afọ Sir Alex Ferguson weghaara na Old Trafford.
Little Marcus malitere ndụ na Fletcher Moss Rangers tupu ụbọchị ọmụmụ nke isii ya.
N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ malitere dị ka onye na-eche nche - ọnọdụ ọ na-enweta n'ike mmụọ nsọ site n'oge ọ na - ejide 'Marcus ball' ka ọ na-ada site n'elu ụlọ ezinụlọ ya.
Mụta ahia nke ịbụ onye nkwụsị, obere Marcus malitere ikpere onye na-eche nche Man United bụ Tim Howard onye ọ lere anya dị ka arụsị bọọlụ mbụ ya.
Little Rashford na-ese uwe ogologo ọkpa Goalkeeper, n'adịghị ka ndị otu ya.
Ebe ọ bụ na papa Marcus Rashford (Robert) nyere ọzụzụ ebe ahụ, ọ dịịrị Marcus mfe ịmalite ndụ na agụmakwụkwọ.
Nke a bụ naanị ụzọ ọ ga - esi kpọtụrụ obere Rashford ka ọ kewapụrụ na nne ya.
Dave Horrocks, mgbe ahụ onye ọrụ mmepe Fletcher Ross Rangers chetara na Marcus nọ na "ọkwa dị iche" ma e jiri ya tụnyere ụmụaka ndị ọzọ na agụmakwụkwọ.
N'oge ahụ, o nyere Marcus ka ọ bulie ụlọ. O chetara na;
Mgbe ọ bụla m nyere ya aka bulie ụlọ na ọzụzụ, Marcus ga-abanye n'azụ ụgbọ ala m yana - n'adịghị ka ụmụ nwoke ndị ọzọ - ọ ga-ada ụra miri emi ozugbo.
Mgbe ụgbọ ala ahụ rutere n'èzí ụlọ mama ya, Rashford mgbe a kpọtere ya, ọ ga-apụ ngwa ngwa, nwee ume ọhụrụ, bulie bọọlụ Marcus ya, wee bido na-eme ihe na ahihia n'èzí ụlọ ya. N'ezie, ọ nweghị njedebe maka ọchịchọ ya ịghọ ndị ịgba ọsọ.
Otu Marcos Rashford si rute United:
Na mbido, onye dị afọ ise jiri aghụghọ ya wee chekwaa ndị otu ya ma nyere ha aka imeri nnukwu asọmpi.
Na asọmpi ahụ, enwere ndị na-agụ 15 si na klọb ndị England kachasị elu na-ele ma n'etiti ha bụ ndị nnọchi anya si Man United na Liverpool.
N'ihi na Fletcher Moss Rangers jigidere United onyinye na-enye onyinye n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ dịịrị ndị klọb kacha elu mfe ịkpọrọ ndị egwuregwu bọọlụ na launpad ha.
Ka ịkpọ aha mmadụ ole na ole, Danny Drinkwater, Ravel Morrison, Jesse Lingard, Danny Welbeck, Wes Brown na Jonny Evans wdg sitere na klọb obodo.
Marcus nọrọ otu izu ikpe na Manchester City tupu ya abanye na usoro agụmakwụkwọ na Manchester United - mgbe ọ dị afọ asaa.
Iningbanye na Red Devils bịara n'etiti mmasị site na Everton na Liverpool. Onye na-eto eto dị ka a hụrụ n'okpuru ebe a kwadoro ụmụnne ya na inyere ya aka ikpebi idebanye aha ya na nnukwu ụlọ akwụkwọ.
Nke a bụ obere Marcus na-achọ obi ụtọ n'oge ọ sonyere Man United agụmakwụkwọ.
Marcus Rashford Mmụta bụ isi:
Mgbe ọ na-atọ ntọala nke ọrụ ya na United, ọ gara ụlọ akwụkwọ praịmarị Button Lane. N’ebe ahụ, e nyere ụmụ akwụkwọ nri n’efu.
Itinye aka n'usoro nri ụlọ akwụkwọ nyere aka belata oke ibu nke nne Marcus, Melanie onye ka na-adọgbu onwe ya n'ọrụ ehihie na abalị maka ezinụlọ ya.
Otu ihe dị mma n'ụlọ akwụkwọ praịmarị Butane bụ na ọnụ ọgụgụ ụmụ akwụkwọ na nri efu bụ okpukpu abụọ karịa nkezi mba.
Little Marcus na-ese onyinyo ebe a na-ekere òkè na atụmatụ ego nri. Eziokwu ahụ nke napụtara ya site na agụụ nwata mere ka o kwe nkwa ịkwado ụmụaka agụụ na-agụ mgbe ọ mere ya na ndụ - nke o mechara mee.
Marcus Rashford Oge Mbido na United:
Ebe ọ bụ na ndị mụrụ ya dara ogbenye, ọ nwetaghị ụzọ isi si n'ụlọ ya gaa United ọzụzụ. N'ụzọ dị mwute, enweghị ụgbọ njem mere ka ọ ghara ịga ọzụzụ.
N'oge ahụ, nne Marcus na ụmụnne nwoke rụrụ ọrụ - ka ha wee nwee ike inye ezinụlọ ha ego.
Ebe ọ bụ na ha enweghị ike iwepụta oge iji bulie ya, nwatakịrị ahụ mechara nweta enyemaka site n'aka ụfọdụ ndị nkuzi ntorobịa bụ ndị bugara ya ọzụzụ.
Nne na-arịọ arịrịọ:
Mgbe Marcus dị afọ 11, mama ya, Melanie mere mkpebi siri ike nke ịrịọ United ka ọ kpọrọ nwa ya nwoke ka ha banye ebe ha bi (nke bụ otu afọ).
O kwenyesiri ike na a ga-elekọta ya nke ọma, yana, ọ ga-erughị otu onye na-eri nri n'ụlọ.
Ọ theụ nke ndị nne na nna na ndị òtù ezinụlọ Marcus Rashford, a nabatara ndị na-ahụ egwuregwu bọọlụ n'anya. Ọ bụ mmuo ya dị nkọ na ụbụrụ football nke ọma nke masịrị Manchester United.
N'ihi Rashford, ụlọ ọrụ ahụ megidere iwu ụlọ mbikọ ha nke ịnabataghị ụmụaka n'okpuru 12.
N'ihi ya, Marcus ghọrọ ọdụdụ nwa ahọrọ na atụmatụ ha Scholarslọ Akwụkwọ Ọkà Mmụta. Mgbe ọ sonyere, obere Marcus kwupụtara ọdịnihu ya na ebumnuche ya na United. Gụọ n'okpuru.
Nke a bụ obere Rashford mgbe ọ nabatara ya Man United Ulo.
Marcus Rashford Secondary Mmụta:
Mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ ama ama ama ama ama ama ama na United United, agụmakwụkwọ sitere n'aka ya maka uru nke ụlọ ezumike klọb.
Man United mere Rasford ịga ụlọ akwụkwọ sekọndrị Ashton-on-Mersey, nke dị kilomita ole na ole site na Old Trafford, n'obodo Sale, Greater Manchester.
Na mmekorita ya na United, ebumnuche ụlọ akwụkwọ Ashton-on-Mersey bụ ịkwado ikike ụmụ akwụkwọ nke ụmụ akwụkwọ na agụmakwụkwọ dị mma.
Na nchịkọta, ndụ Marcus Rashford gbanwere kpamkpam mgbe ọ nwetara ebe na agụmakwụkwọ ntorobịa nke United. Ọ gara ụlọ akwụkwọ ọhụrụ, nwee ndị enyi ọhụrụ wee mesịa nyere mama ya na ezinụlọ ya aka ịpụ n'ọnọdụ ha.
Marcus Rashford Biography - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'agbanyeghị nke ahụ, na Ashton-on-Mersey, Rashford gara ụlọ akwụkwọ egwuregwu. Ọ gụrụ Business Council na Technology Council (BTEC) ma nweta akara ugo mmụta mba na egwuregwu.
Ekele maka atụmatụ ndị nkuzi Manchester United Schoolboy, Marcus dị ka a hụrụ ebe a na Timothy Fosu-Mensah, Axel Tuanzebe (wdg) nwetara ụwa nke ụwa nkịtị.
Marcus bụ ụdị onye na-aga akwụkwọ, ga-enye ikike ọ bụla atọm nwere n'ike.
N'ezie, kpakpando ndị ahụ na-eto ngwa ngwa na-esochi ngwa ngwa, ihe ngosi nke hụrụ ya ka ya na ndị na-agba ụkwụ ochie na-emekọ ihe - afọ anọ ọ bụ okenye.
N'oge ahụ Marcus ghọrọ enyi Paul Pogba, Ravel Morrison na Jesse Lingard.
Mgbe Marcus dị afọ 14, ọ na-agbaso àgwà ya na uto ya. Nwatakịrị ahụ hụrụ onwe ya ka ọ na-eto ngwa ngwa n'ịdị elu ma wughị ya.
N'ezie, ụkwụ ya na-eto ogologo ma ọ ga-efunahụ ya n'oge ụfọdụ.
Na 15, o wuru onye na-eme agadi karịa n'eziokwu, bụ nwata. Marcus dị tupu afọ ndụ ya, ọ nweghịkwa ahụ iru ala na ya.
“N’oge ihe a na-eme, obi jọrọ ya njọ n’ihi na ọ nweghị ike ime ihe ọ ga-emeli. Nwa m nwoke nwere obi ojoo ma obu obi ojoo n’ihi ya. ka papa ya kwuru.
Marcus Rashford Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Marcus tinyere mgbalị siri ike na oge ọzụzụ ọzọ na ndị ọzọ ịmatakwu banyere okenye ahụ ọ na-aghọ. N’oge na-adịghị anya ọ ghọtara asụsụ ahụ ya nke ọma.
Igwe uto na-eto eto ghọrọ 16, ka nọ na-eto eto na-egwu n'okpuru 18 football. Asọmpi ya na ụmụ okoro ndị nwoke toro eto mere ka ike gwụ ya.
Ozugbo Alex Ferguson ekpe, Marcus - na ọ theụ nke ndị òtù ezinụlọ ya - bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya. Nwatakịrị ahụ nwere obi ụtọ ịmalite ọzụzụ na ndị otu egwuregwu mbụ nke United n'okpuru nduzi nke David Moyes.
N'ime aha niile, ọ bụ Louis van Gaal onye tinyere Rashford n’oche nke mbụ na nke mbụ. Nke a bịara n'ihi nsogbu mmerụ ahụ hụrụ 13 United kpakpando na-efu egwuregwu.
Obi dị m ụtọ, ahọrọla Rashford ka ọ bido ọgbakọ izizi nke izizi nke o nyere goolu abụọ. Kemgbe ahụ, ọ ghọrọ ọkacha mmasị Fans ma ghara ile anya n'azụ.
Okwesiri ighota na Rashford bu agadi 18 na ubochi 120 mgbe o meriri ihe nkwado mbu ya nye ndi Red Devils.
Nke a bụ kpọmkwem afọ ahụ Wayne Rooney bụ mgbe ọ mechara ihe a.
Ọ bụ ezigbo ọmarịcha - nke wetaara ya ọtụtụ nsọpụrụ. Ndị ọzọ dị ka anyị na-ekwu, nke Bio ya, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Marcus Rashford na Lucia Loi - Akụkọ Lovehụnanya:
N'azụ onye ọ bụla na-agba ọsọ na Manchester United, ọ ga-enwerịrị WAG na-adọrọ adọrọ.
Maka Marcus Rashford, anyị na-ewetara gị ịhụnanya maka ndụ ya. Ọ bụghị onye ọzọ karịa Lucia Loi - nwanyị a ma ama nke akpọrọ Marcus Rashford's Girlfriend na nwunye ka ọ bụrụ.
Na-enyocha ya na Instagram, ị ga-ahụ na ọ na-ezobe mmekọrịta ịhụnanya ya - ikekwe n'ihi na ọ bụ onye ihere. Mana Marcos Rashford nọ na mmekọrịta dị oke mma na ọmarịcha ịma mma a (dịka nke Jenụwarị 2021) onye nwere ike ịbụ nwunye ya.
Ọnye na-bụ Lucia Loi, Marcus Rashford's Girlfriend?
A mụrụ ya na 4th ụbọchị nke August 1997, na Manchester, England site na mama ya, Vicky. Lucia sitere n’agbụrụ andtali na o nwere ọtụtụ ndị ezinụlọ ya n ’Italytali.
Ya na nwanne ya nwoke a na-akpọ Alex na asịrị na ọ bụ ejima.
Dabere na akụkọ na Sun, enyi nwanyị Marcus Rashford Lucia Loi nwere bụ onye njide akara ugo mmụta mbụ na Mahadum Manchester Metropolitan.
Ọ mụtara mgbasa ozi na njikwa njikwa na otu oge ọ na - arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ PR nke dị na Manchester, Sugar, dịka onye nchịkwa akaụntụ PR.
Dabere na profaịlụ mgbasa ozi mgbasa ozi Lucia, ọ hụrụ n'anya isonye na ọrụ ebere na Africa ọkachasị Zambia.
Ọ na - enyere aka ịnabata klaasị na ahụike maka ụmụaka dara ogbenye. Na ya Bio, Loi kwuru na ọ na-enwe mmasị n'ịgba bọl, na-eme njem ma na-enwe ọhụụ. Mana nke kachasị, ọ hụrụ Marcus n'anya.
Ọnọdụ nke mmekọrịta ha - Marcus Rashford na Lucia Loi:
Ndị enyi abụọ ahụ bụ obi obi nwata ma kọọrọ ha kemgbe ha bụ ụmụ akwụkwọ.
Di na nwunye a na-apụ apụ oge ụfọdụ mana ọ na-ahọrọ ịhapụ mmekọrịta ha na mberede.
Ogwe na ụlọ oriri na ọ restaurantụ Bụ Bemil nke Manchester - ebee Jose Mourinho ozugbo iri nri yiri ka ọ bụ ebe ezumike kachasị amasị ha.
Ikpe ikpe site n'ụzọ ha abụọ na-ekpori ndụ ịhụnanya ha, nkwupụta na mgbe agbamakwụkwọ nwere ike ịbụ usoro iwu na-esote.
Marcus Rashford na-ahụ onye ọzọ?
A hụrụ mmetụta nke United States na brunette ya dị omimi nke aha ya bụ Courtney Morrison - mgbe ọ na-alọta site na ụlọ ịgba egwu abalị.
Mgbe e mesịrị, nwanyị ọzọ aha ya bụ Lauryn Goodman. Ndị mgbasa ozi mechara chọpụta na ọ bụ nwanne nwanne Rashford- enyi nwanyị Dane.
Marcus Rashford Ndụ Nke Onwe:
Akụkụ a na-akọwa àgwà ya dị anya na ihe ọ na-eme na pitch. Ihe mbu, Marcus bu nwoke nke nwere otutu ihe.
N'èzí football, ọ na-ekere òkè n'ihe omume ntụrụndụ ndị ọzọ dị ka ịkụ basketball, guitar, snooker na ikere òkè na ngosipụta ejiji. Ghara ichezọ, ọ bụ nnukwu nkịta hụrụ n'anya nke nwere anụ ụlọ aha ya bụ Saint.
The Food Ogbenye Akụkọ nke:
Ka nsogbu coronavirus kụrụ ụwa, Marcus Rashford chere na ọ bụ ọrụ dịịrị ya iji nyere ụmụaka nwere ike ịnwe nsogbu aka ịta ahụhụ site na ụkọ nri.
Na-echeta mgba nke ya mgbe ọ na-etolite, o kwere nkwa ịkwụ ụgwọ United ya n'ọrụ.
Marcus malitere ịkwado ụlọ akụ nri, na-eme ka ụmụaka ghara agụụ site na agụụ dị ka ọ mere n'oge ọ bụ nwata.
Na-arụ ọrụ n'akụkụ nne ya na mkpọsa ịda ogbenye nri ya, omume Marcus nyeere aka ịchekwa ihe ruru ụmụaka nde 1.3. Ihe omume a dugara ya ka a họpụtara ya dịka Onye otu nke Order nke Alaeze Ukwu Britain (MBE) na Ọktoba 2020.
Ndụ Marcus Rashford:
Mba England bụ ihe atụ nke onye a ma ama nke si na Rags To Riches. Marcus na-etinye ego ya nke ọma, ma ya onwe ya ma n'ezie, ọrụ ebere. Ka anyị kwusi eziokwu banyere ụdị ndụ ọ na-ebi.
Gbọ ala Marcus Rashford:
Maka ndị na-ebido ebido, ọ bụ nnukwu onye egwu ụgbọ ala German, Mercedes-Benz. Ọzọ na ndepụta ya kachasị amasị ya bụ Range Rover.
Marcus Rashford Mercedes-Benz ngwaahịa ụgbọ ala gụnyere CLA, C Di na Nwunye, GLA na G Class.
Cuslọ Marcus Rashford:
Ozugbo o mere ya na football, nwa amaala Manchester gọziri mama ya Melanie na ụmụnne ya nwoke Dane na Dwaine. O wuru ụlọ obibi £ 800,000 maka ha, nke dị nso na ebe o toro na Wythenshawe.
Ka oge na-aga, Marcus gbasaa nde £ 1.85 iji wuo ụlọ nke aka ya. Anyị chọpụtara na ọ na-adịghị amasị echiche nke ịzụ ụlọ kama, na-ewu ụlọ ya rọrọ otú ọ chọrọ.
Marcus Rashford Onye Nwepu Onwe Onye:
Onye na-eti England na-etu ọnụ, ma ọ bụ iji kwuo "mgbanwe" n'ụzọ kachasị njọ, na enweghị ihere. Mgbe ụfọdụ, ọ na-edebe ụgbọ ala Mercedes-Benz n'akụkụ ya ka ọ jupụta n'ụgbọelu nke ya.
Marcus nwere mmasị iji mgbasa ozi mgbasa ozi ya iji gosipụta obi ụtọ ezumike ya. N'adịghị ka ọzara, ọ na-ahọrọ kristal doro anya mmiri nke mbara igwe ya na-enyere ya aka ịtụgharịkwu uche banyere ndụ ya.
N'ikpeazụ, Marcus bụ nnukwu onye na-egwu egwuregwu mmiri jet.
Ezigbo Marcus Rashford:
Nwa ala Manchester anaghị ahụ ụlọ ya dịka ihe dị mkpa. N'ezie, ha pụtara ya ihe niile.
Ncheta ncheta nwata nke Marcus na-eso ndị a bụ otu n'ime ọrụ okike kachasị mma. N'akụkụ a, anyị ga-agbaji eziokwu banyere onye ọ bụla nọ n'ụlọ Rashford.
Banyere Marcus Rashford Nna:
Robert Rashford nke dị n'okpuru ebe a bụ nna ya nke ọma n'agbanyeghị nkwupụta ndị na-adịbeghị anya.
N'ihi nkewa dị n'etiti ya na Mel ya, nna Marcus Rashford abịaghị n'oge dị oke egwu na ndụ ụmụaka. Omume a kpasuru Dwaine nwa ya nwoke iwe, si otú a mee ka ọ gbanwee aha nna ya na nke nne ya.
Site na mmụọ ịgbaghara mmehie, ezinụlọ Marcus Rashford jikọtara na Robert n'oge na-adịghị anya mgbe obere nwa ha mere ya na football.
Mgbe nlọghachi ahụ, otu nwa nwanne nna Marcus kpughere na onye isi ezinụlọ "Robert ka nwere obere mmekọrịta ya na ụmụ ya mana ọ na-ata Mel ụta maka na o kweghị ka ya na ha nọrọ nso n'afọ ndị ahụ dị oke egwu. ”
N'ihi ọrụ mbụ ya na ọrụ nwa ya, Robert ka maara ihe banyere njikwa football. Ya na nwa ya nwoke na - arụkọ ọrụ ọnụ, Dwaine dị ka Marcus; gị n'ụlọnga.
N'adịghị Hichapụ Ali, Rashford enweghị iwe megide nna ya. Ikwe ka ọ bụrụ akụkụ nke ndị ọrụ nchịkwa ya bụ ihe ama nke ịdị mma ya.
Banyere Marcus Rashford Nne:
Amụrụ na afọ 1964, a na-akpọ ya Mel. Melanie Maynard bụ nne Marcus, onye ọrụ ego site na ọrụ. N'oge Marcus bụ nwata, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye na-akwụ ụgwọ na ịkụ nzọ Ladbrokes Online.
Nne nke Marcus bụ Onye Kraịst nwere obi ebere, onye gosipụtara site na ụbọchị gosipụtara mkpebi siri ike ịghara ikwe ka ụmụ ya si n'ụgbọ okporo ígwè pụọ. Ndị football football na-asọpụrụ ya maka ịzụ ụmụ ya naanị.
Na enweghị di ya, Robert, ọ nọrọ n'alụghị di - na-enyeghị ohere maka Nzọụkwụ Papa ga-ekwe Marcus Rashford.
Obi dị Mel ụtọ maka idebe ụmụ ya ise; Chantelle, Dwaine, Claire, Dane na Marcus ha nile nwere nsogbu mgbe ọtụtụ ndị ezinụlọ ha enweghị ike.
Enweghị ya, ọ gaghị enwe Marcus Rashford na United.
Nne Marcus Rashford bụ onye ya na ya na-arụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ nri nri Manchester. Mel na Marcus dị ezigbo nso.
A na-ese ya ebe a na-ewere ngwa ahịa mgbe nwa ya nwoke na-ebutu ihe oriri maka ọrụ ebere ha FareShare na Greater Manchester.
You maara? Ware ụlọ nkwakọba ihe a ebe a na-echekwa ihe oriri bụ aha nne ya, Melanie.
Banyere Marcus Rashford Brothers:
Onye bọọlụ bọọlụ bekee nwere ụmụnwoke nwoke abụọ aha ha bụ Dwaine Maynard na Dane Rashford. Ndị ikom atọ a na-aga nke ọma bụ Brothersmụnna n'ime mmụọ.
Ha nwere nkekọ nke na-emebi emebi ruo mgbe ebighị ebi. N'ebe a, anyị ga-agwa gị banyere ụmụ nwoke nwoke abụọ nke Marcus.
Banyere Dwaine Maynard:
Nwanna nwoke a nke Marcus bụ ọkpara nke ezinụlọ ahụ. Amụrụ na afọ 1984, ọ dị afọ abụọ karịa Chantelle Rashford na afọ abụọ toro karịa nwanne ya nke aha ya bụ Claire Rashford.
N'ime ụmụnne Rashford niile, Dwaine nwere mmasị na azụmaahịa bọọlụ. Nwanna nwoke a nke Marcus nke yiri Jay Z, bu onye okacha amara nke nkwekọrịta nkwekọrịta na ụbụrụ n'azụ ụgwọ w 200,000 na United.
Dwaine bụ Onye isi nchịkwa nke Njikwa Egwuregwu DN May Ọzọkwa, Intermediary Football Registered.
Dwaine Maynard jụrụ ịza aha nna ya n'ihi na o kwuru na Robert hapụrụ onye ọ bụla wee pụọ mgbe alụm di na nwunye ya (Mel) kwụsịrị.
Ugbu a, ọ gbagharala papa ya ma rapara n'aha nne na nna ya ochie - Maynard.
Banyere Dane Rashford:
Amụrụ na afọ 1993, ọ bụ nwanne nwanne okenye Marcus. Dane bu onye aru site na oru.
Ọ bụkwa nwanne nwoke kachasị nwee mmasị na Marcus. Ha abụọ nwere mmekọrịta nwanne siri ike karịa onye ọ bụla nọ n'ụlọ ya.
N'adịghị ka Dwaine Maynard onye na-elekọta ọrụ mmekọrịta Marcus, Dane anaghị elekwasị anya na football. Anyị maara ya dị ka onye na-esoro nwanne ya nwoke na-egwu egwuregwu kọmputa.
Banyere Marcus Rashford istersmụnna:
Onye n’agba boolu England nwere umu nne ato. Abụọ n'ime ha (Chantelle na Claire) mụrụ Marcus papa na mama.
Onye nke ọzọ (Tamara) nwere mmekọrịta na Marcus site n'aka papa ya. Ka anyị kọọrọ gị gbasara ụmụnne Marcus Rashford.
Nwanne nwanyị nke Marcus bụ eze nwanyị mara mma nke mere ya na njedebe nke Miss England. Tamara bu onye enyemaka ahia na nkwukọrịta site na aka.
Ọ bụ Mahadum nke Salford gụsịrị akwụkwọ na klas mbụ na International Events Management.
Na 2019, Tamara mara mma bụ otu n'ime ndị mmeri 55 na-enwe obi ụtọ n'ime ụmụ nwanyị 20,000 nke asọmpi Miss England.
Site nnọọ na-achọ na ya pụtara mma, ị ga-ekweta na m ọ bụ ọnụ ahịa ya. Tamara bụ otu afọ ahụ nwanne ya nwoke (Marcus) - ha abụọ mụrụ na 1997.
Banyere Chantelle Rashford:
Robert na Melanie nwere ya dị ka ọkpara ha. A mụrụ ya n'afọ 1982 mgbe Marcus mum (Mel) bụ naanị 19.
Chantelle Rashford bụ onye na-elekọta obere Marcus na ụmụnne ya n'oge ndị mụrụ ya kewara. Na-eme dị ka nne ha mgbe Melanie nọ na Ladbrokes na-arụ ọrụ maka nri ezinụlọ kwa ụbọchị.
Banyere Claire Rashford:
Amụrụ na 1986 na Manchester, ọ bụ nwa nwanyị nwanyị nke okenye nke abụọ na Marcus.
Claire Rashford dị afọ abụọ karịa Dwaine Maynard na afọ asaa karịa Dane Rashford. Dịka Chantelle nwanne ya nwanyị, Claire na-ebi ndu dị ala.
Banyere Nicholas Rashford, nwanne Marcus Rashford:
Onye ikwu ahụ bụ nwanne nwanne nna ya, nwoke bụ onye gara mkpọrọ maka nnukwu mpụ.
Mgbe Marcus dị nanị afọ isii, nwa nwanne nna ya bụ Nicholas Rashford mara ikpe igbu ọchụ, kpomkwem na afọ 2004. Ọ bụ 18 ka nke ahụ mere, nke mere ka o ruo eruo ịga mkpọrọ.
A mara Nicholas Rashford mkpọrọ afọ 16 ka ọ gbarịrị enyi ya ụlọ akwụkwọ, Alex Doyle, bụ onye 20 n'oge ahụ.
Ihe omume ahụ mere n'oge agha n'okporo ámá na Nicholas gburu Alex dị ka ụzọ ịbọ ọbọ.
Nwa nwanne Marus Rashford kwuru na onye ahụ a tara ahụhụ "lere ya anya ka ọ na-akpa ọchị" nakwa na ọ ga-"kuziri ya nkuzi". O nyere Alex Doyle nma na obi nke gburu ya.
Ka m na-ede Bio a, Nicholas si n'ụlọ mkpọrọ pụta ugbu a na ikikere iji hụ ịrị elu nke onye ikwu ya.
Marcus Rashford Eziokwu Eziokwu:
Ebe anyị jegharịrị site na ncheta nke bọọlụ bọọlụ amaara nke ọma, anyị ga-eji ngalaba a gwa gị eziokwu ndị ọzọ gbasara ya. N’atufughi oge, ka anyị bido.
Eziokwu # 1- Jay Z Roc Mba:
N'oge ahụ Marcos Rashford buru ụzọ kpuchie isi ya, anya mba ụwa na-elegide ya anya.
N'ụzọ dị ịtụnanya, otu n'ime ndị na-amasị ya mbụ bụ nnukwu egwu egwu Jay Z, onye nwere ụlọ ọrụ na-ahụ maka egwuregwu akpọrọ Roc Nation Sports.
Onye America rapper so n'ime ndị mbụ kwupụtara mmasị na Forward. Nke a bịara dịka ha nwere ihe ịga nke ọma na ịme Kevin De Bruyne na Romelu Lukaku ndị ahịa bọọlụ kasịnụ.
O di nwute, ndi nne na nna kwụsịrị njem a ma kwusi ike na umu-nne ya aghaghi ibu onye nnochite anya ya.
Eziokwu # 2- Marcus Rashford igbu na ihe ha pụtara:
Ọdụm ọdụm na ọ pụtara:
Ihe osise a na-egosi iru odum di n’elu obi ya. Ogbugbu ọdụm a na-anọchite anya àgwà Marcus dị ka onye na-eme egwuregwu. Ọ pụtara na àgwà ya na nke nnukwu pusi.
Akwụkwọ mpịakọta na Ekpere Aka Aka:
N’ubu aka ekpe ya, e nwere nnukwu akwụkwọ mpịakọta nke e dere okwu ya, “Ezinụlọ Ruo Mgbe Ebighị Ebi”. O nwere aha ndị ezinụlọ ya na ụtụ nye Nan.
Ọnwụ a na-akọwa ịhụnanya o nwere maka ezinụlọ ya na nne nne ya, Cillian Henry. Marcus na-ekpe ekpere aka na-anọchi anya aka nne nne ya - nwanyị nke na-ekpegara ya ekpere oge niile tupu ya anwụọ.
Tlọ Tattoo na ọ pụtara:
Akụkụ aka ekpe nke afọ Rashford nwere ihe osise nke obere nwatakịrị na-egwu bọl n'ihu osisi dị nso na nnukwu ụlọ.
Nwatakịrị ahụ bụ Marcus na ụlọ ahụ na-anọchite anya ụlọ ọrụ gọọmentị siri ike na Wythenshawe - ebe ọ nọrọ nwata. Ọnwụ ahụ na-echetara ya mgbọrọgwụ ya na otú o si agba bọọlụ mgbe ọ bụ nwatakịrị.
Eziokwu # 3 - Marcus Rashford Manchester United rygwọ Salagwọ Salagwọ:
Superstar malitere na £ 500 kwa izu mgbe ọ malitere egwuregwu mbụ ya na United. Ka m na-emelite akụkọ ndụ ya, nke a bụ ụgwọ ụgwọ ụgwọ Marcus Rashford ugbu a - dịka 2021
Nwoke UNITED SALARY IN Pound (£)
Kwa Afọ: 10,416,000
Ọnwa kwa: 868,000
Kwa Izu: £ 200,000
Kwa :bọchị: £ 28,571
Kwa elekere: £ 1,190
Nkeji nkeji: £ 19.8
Kwa Nke Abụọ: £ 0.33
Ebe ọ bụ na ị malitere ile Marcus Rashford si Bio, nke a bụ ihe ọ rụpụtara na United.
You maara?… Otu onye bi n'England na-akpata ego 30,000 pound kwa afọ ga-arụ ọrụ maka Afọ 6 na ọnwa 7 iji mee ka Marcus Rashford na-akwụ ụgwọ kwa izu na Man United.
Rashford na Nike na-akwado nkwado nkwado ma nwee ezigbo ahụmịhe ọrụ n'okpuru eriri ya.
Na enweghị ọdịmma azụmaahịa ogologo oge (dịka nke 2021) na naanị ụgwọ ndị Man United + ịkwụ ụgwọ Nike, anyị na-etinye akụ ya ruru ihe ruru £ 65 ($ 80m).
Eziokwu # 4 - Egwuregwu egwu:
Ọ ga-eju anya na Marcus (mgbe ọ dị afọ 22) so na ndị na-eto eto kachasị elu na FIFA. Naanị adịghị ike ya bụ Ntinye - nke anaghị agụta.
Eziokwu # 5 - The Sir Bobby Admụaka Mgbasa Ozi:
Marcus mere mkpughe banyere oge ochie ya, mgbe ọ bụ akụkụ nke vidiyo na akụkọ United na England.
Ọbụna ruo mgbe ọ ga-enwe ọganihu, ndị na-agba ọsọ na-enwe mmetụta na-enweghị atụ mgbe niile banyere etu nnukwu ugwu si dị nso nso na Akụkọ Mgbe Ochie. Lelee vidiyo ahụ.
Eziokwu # 6 - Okpukpe Marcus Rashford:
Aha ndị ngba bọọlụ nwere mbido Greek ma ọ sitere na aha chi Rome nke agha Mars.
Agbanyeghị, aha Akwụkwọ Nsọ pụtara aha Marcus bụ 'Nchebe' na ọ bụ 'Akara' n'ime Akwụkwọ Nsọ. Site na ebumnuche a, anyị nwere ike ikwu n'ụzọ doro anya na okpukpe ya bụ Iso Christianityzọ Kraịst.
Anyị na-atụ anya na ụdị anyị nke Marcus Rashford Biography ga-enyere ndị na-akwado mmụọ nsọ chọrọ mmụọ sitere na akụkọ ndụ-akụ na ụba. N'ezie, ọ bụ n'etiti ndị na-agba ọsọ ụkwụ ama ama malitere Dirt Poor.
Akụkọ banyere Marcus Rashford na-akụziri anyị na site na nkatọ, mkpebi siri ike na ntakịrị ntakịrị, onye ọ bụla nwere ike imeri nsogbu ha ma nweta ọganiike pụrụ iche.
N'ikpeazụ, ọ dị ndụ Lifebogger ka o nye nne na nna Marcus Rashford aka (ọkachasị Melanie, nne ya) bụ ndị rụrụ ọrụ dị oke mkpa nke dugara n'ọfụma akụkọ ya.
Nna Marcus Rashford, Robert anaghị ahapụ ya. O so na compass dugara ya na mmalite ndụ ya.
Brothersmụnna nwoke; Dwaine na Dane, Smụnna nwanyị; Claire, Chantelle na Tamara nwere obi ụtọ inwe obere nwanne na Marcus.
Nwa amuru ohuru nke malitere iso ha sie ike na otu ugbo. Marcus ghọrọ onye ahọpụtara nke meworo ka ezinụlọ ya si na ịda ogbenye na ndagwurugwu ruo ebe dị elu nke ama / akụnụba.
Na Lifebogger, anyị na-ewere izi ezi na ịzi ezi n'ime mmata mgbe ị na-eweta Akụkọ nke Ndị egwuregwu bọọlụ bekee.
Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya na akụkọ ndụ anyị. Ma ọ bụghị ya, tinye okwu banyere echiche gị banyere Marcus Rashford Bio. Iji nweta nchịkọta ngwa ngwa nke Memoir ya, jiri tebụl anyị Wiki.
Aha zuru ezu: Marcus Rashford
aha otutu: Onyeisi England
Ụbọchị ọmụmụ: 31st nke Ọktoba 1997
Ebe amụrụ onye: Manchester, England
Ndị nne na nna: Robert Rashford (Nna) na Melanie Maynard (nne).
Nna Bi Ndụ: Michael Boye Marquaye
Ibmụnne (Brothersmụnna): Dwaine Maynard na Dane Rashford (cusmụnna Marcus)
Mụnne (Smụnna nwanyị): Chantelle Rashford, Claire Rashford na Tamara Rashford (nwanne ya nwanyị ọkara)
-arụ: Onye na-agbachitere ndị mmadụ
Ndị ikwu: Alex Doyle (Cousin) na Cillian Henry (Nnukwu nne)
elu: 1.8 mita ma ọ bụ 180cm
ọ dị nzuzu ego ndị ọgba bọọlụ a na-akpata ihe niile dị ebe a na-agba bọọlụ